Liqeessitoonni idil-addunyaa Somaaliyaaf liqaa olaanaa haqaniif - BBC News Afaan Oromoo
Liqeessitoonni idil-addunyaa Somaaliyaaf liqaa olaanaa haqaniif
Baankiin Addunyaafi dhaabbilee maallaqa addunyaa Somaaliyaan tarkaanfiiwwan liiqaan akka hir'atuuf dandeessisan raawwachushee beeksisuun wal qabatee biyyattiin deeggarsa liqeessitootaa argattee jirti.
Akka ibsa kanaattis waliigalli liqaa Somaaliyaarra jiru doolaara biiliyoona 5.2 haala olaanaadhaan ni hir'taaf. Kunis waggoota sadan dhufan keessatti kan ta'uudha.
Somaaliyaatti bakka bu'aan Baankii Addunyaa Hug Raayidal BBC'tti akka himaniitti, adeemsa dheeraa baay'ina liqaa Somaaliyaa hir'isuuf gaggeefamu keessaa kun tarkaanfii jalqabaati jedhaniiru.
Somaaliyaa wal waraansa waggoota 30 dura ture irraa kaasee, liqaashee kanfalte hinbeektu. Kanaafu, biyyattiin yaaliin ishee liqaa gara biraa dhaabbilee idil-addunyaa liqeessan irraa argachuu taasisaa turteetti danqaa ta'ee ture.
Amma liqaan haqame kun waan taasifameef motummaan tajaajilawwan guutuu biyyaa keessatti taasisuuf liqaa gaafachuuf ni dandeessisa.
Ministirri Mummee Somaaliyaa Mistar Hasan Alii dhimmicha ilaalchisuun yaada kennaniin, ''Kunis bilisummaa lammaffaa bilisummaan booda arganneedha'' jedhaniiru.
Haasaan bilbilaa Keeniyaafi Somaaliyaa araarsee?
''Haalli amma kessatti argamnu baay'ee rakkisaa waan ta'eef, haala tarkaanfii dhaabbilee liqeessitootaan fudhatame kanaanis deegarsi bajataa argachu dandeenyu ummata biyyattii guutuuf tajaajila dhiyyeessuuf deeggarsa guddaa taasisa.
Hunda caalaa ammoo koronaavaayirasii hunda keenya raasaa jiruu ittisuuf nu gargaara,'' jedhaniiru Ministirri Muummee kuni.
Biyyoota akka Somaaliyaa irra deddeebiin halleellaan shororkeessummaa irra qaqqabuutti, miidhaa qolachuuf dinagdee guddisuun murteessaadha kan jedhan Ministirri Mummee kun, dargaggoofi dubartootas fayyadamtoota carraa hojii taasisuufilleen murteessa ta'u himu.
Qabeenyaa haqa qabeessaafi iftoomina uumuudhaan shororkeessuummaa mo'achuun waan danda'amuuf, murteen hir'isuun liqaa kunis biyyattiif bu'aa damee hedduu kan kennu ta'u dabaluun dubbataniiru.
Somaaliyaan daangaakoo cabsuun waraana narratti geggeessitee jirti jechuun Keeniyaan himattee turte.
8 Bitooteessa 2020
Xilaahun Yaamii du'aan akka adabamu Abbaan Alangaa gaafate